Iindaba -I-Shinva: Ukugxila kuPhuculo olukumgangatho ophezulu
Ngomhla we-17 kweyoMsintsi, iqela labapapashi beendaba zaBantu bemihla ngemihla, i-Arhente yeendaba i-Xinhua, isikhululo sikanomathotholo kunye nesikhululo sikamabonakude, i-Guangming Daily, uQoqosho lwemihla ngemihla kunye namanye amajelo osasazo aseShandong, kunye nabezindaba bephondo nabakwamasipala be-Mass Newspaper. Iqela, iSikhululo sikanomathotholo nesikhululo sikamabonwakude, iShandong yoShishino lwemihla ngemihla kunye namanye amajelo eendaba ephondo nakamasipala, bangena eShinva. Gxila kwiziphumo zenguqu yamandla amatsha namadala ekinetic kunye neziphumo zophuculo oluphezulu.
Amajelo eendaba atyelele kwaye enza udliwanondlebe neShinva New and Old Kinetic Energy Conversion Theme Exhibition Hall kunye neShinva Pharmaceutical Equipment, iiComputer Technology Products kunye neRadiological Diagnosis and Treatment Products Production Workshop, kwaye benza ukuqonda okucacileyo kwebhetshi yokuqala yeeprojekthi ezithandwayo “iSinnva Biopharmaceutical Equipment kunye Imveliso yokuPhononongwa kwezeMpilo kwiProjekthi yezoPhuhliso lwamaShishini ”kwiPhondo eliTsha neLidala leKinetic Energy Conversion Project enkulu.
U-Wang Yuquan, usekela-Nobhala weqela kunye nomphathi jikelele weShinva, uhambisane neqela labapapashi kutyelelo. Ikwazise nakumagumbi okushicilela ukukhula okuphezulu kweShinva, iimveliso eziphambili kunye neetekhnoloji ezinxulumene nazo ezinje nge-peracetic acid yeqondo lobushushu eliphantsi elazalelwa eShinva, i-CT ekhokelela ekuvulekeni okukhulu kunye namandla aphezulu e-elektroniki e-elektroniki , Kunye ne-ampoule yeplastikhi yomatshini wokugcwalisa abathathu-in-one (BFS) owaphula ulawulo lwangaphandle.
Udliwanondlebe lujolise ekupapasheni nasekumiliseleni umoya wentetho ebalulekileyo kaNobhala Jikelele u-Xi Jinping kwiSimposium yoKhuselo lweNdalo kunye noPhuhliso olukumgangatho ophezulu kwiYellow River Basin, nokubonisa ngokupheleleyo uphando olwenziweyo kunye neziphumo ezenziwayo ezenziwe liphondo lethu ekukhuthazeni indalo. ukhuseleko kunye nophuhliso olukumgangatho ophakamileyo kwiBlue River Basin, kugcinwa engqondweni ukuphathiswa. Njengommeli wamashishini asahlumayo, uShinva ubambelele kumgaqo-nkqubo weqhinga "lokudityaniswa, ukuphuculwa kunye nokuphuculwa kokusebenza kakuhle" kule minyaka idlulileyo, kulinywe ngokunzulu iimveliso zetekhnoloji ephezulu, kugxilwe kutshintsho lwamandla amatsha namadala ekinetic, kwaye walandela ngokungagungqiyo indlela yophuhliso olukumgangatho ophezulu. Ngeli xesha amajelo eendaba angene eShinva, egxile ekuqondeni ukukhula okuphezulu kweShinva.